४८ घण्टामा अन्तरिक्षबाट पृथ्वीतर्फ ठूलो खतरा आउँदै, के भन्छ नासा ? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /International/४८ घण्टामा अन्तरिक्षबाट पृथ्वीतर्फ ठूलो खतरा आउँदै, के भन्छ नासा ?
मेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा)ले अबको ४८ घण्टामा एउटा खतरनाक घटनाक्रम आकाशमा देखिनसक्ने जनाएको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको विश्वको अगाडि नयाँ समस्या आउँने पो होकी भन्दै वैज्ञानिकहरू चिन्तित बनेका छन्।नासाका अनुसार एस्टेरोयड (एक ठुलो तारा) पृथ्वीतर्फ आएर खस्न लागेको छ। यो तारा पृथ्वीबाट करिब ६४ लाख किलोमिटर पर खस्ने नासाको अनुमान छ। तर, यदि दिशामा थोरै परिवर्तन भएमा खतराको सम्भावना बढी छ।
पृथ्वीबाट टाढा खस्ने भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको नासाका वैज्ञानिकहरुको भनाई छ। केही वैज्ञानिकले भने चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। यो उल्का पिण्डलाई नासाका वैज्ञानिकले सबैभन्दा पहिले सन् १९९८ मा देखेका थिए। यसको ब्यास करिब ४ किलोमिटरको छ।यो तारा अप्रिल २९ मा पृथ्वी नजिक खस्ने अनुमान गरिएको छ। खगोदविद्का अनुसार यस्ता तारा हरेक एक सय वर्षमा ५० हजार पटक पृथ्वीमा ठोक्किने सम्भावना हुने गर्दछन्। यी तारा प्रायः वायु मण्डलमा आउनासाथ जल्ने गर्दछन्। यसबाट ठूलो नोक्सान नहुने पनि बताइएको समाचारमा उल्लेख छ।